Ikhompyutha akaboni induku - yini okumele ngiyenze? Izindlela ukuxazulula inkinga
Amakhompyutha, Idatha yokutakula
Mhlawumbe ngamunye wethu uphethe drive flash ephaketheni lakhe. Ezikoleni, abafundi ngesikhathi ikhophi yakhe tutorials ezahlukene makhaya kungase kuzenze zibe computer yakhe futhi ukufunda ngesikhathi sabo esikhululekile. kakhulu, ngeke akwazi ukwenza umsebenzi wazo ehhovisi ngaphandle flash, ke zingagcinwa entweni ezihlukahlukene izincwadi ezibalulekile izithombe ngekhompyutha. Intsha ngokuvamile ukwabelana umculo, ama-movie eqoshiwe kulo. Ngokuvamile, kuba into edingekayo kakhulu futhi ewusizo. Kodwa iningi lethu ngokushesha noma kamuva ebhekene nenkinga evamile - computer akaboni induku. Okufanele ukwenze esimweni esinjalo? Kanjani ukulungisa inkinga? Kanjani ukuze uqiniseke ukuthi kukhompyutha namanje exhunywe ukubona emafleshikhadi? On mibuzo neminye siye manje ngeke ngizame ukuthola izimpendulo.
Ikhompyutha akaboni induku. Yini okumelwe uyenze?
Ukuqala unaka inkomba, okuyinto abanalo Emafleshikhadi kakhulu. Uma ovuthayo noma eshaywa, kusho ukuthi Kulungile futhi inkinga kumele wafuna ku-PC yakho, noma kunalokho, isofthiwe yayo. Kungase kwenzeke ukuthi ngeke kube khona izibani inkomba, kusho ukuthi kungaba khona inkinga nge-USB-port - zama kokuxhuma idrayivu ye-USB flash kwenye. Futhi uma inkomba namanje akusho bakhazimula ke cishe, kuzodingeka ukuba ngithi goodbye kuya lonke ulwazi ukuthi ezigcinwe kuyo, ngoba zokuluthola kungaholela isamba kunalokho icocekile.
I amaphutha ezivame kakhulu
Ngakho, ikhompyutha yakho akaboni induku. Kuthiwani uma kwakukhona umlayezo ku screen ukubonisa "idivayisi ye-USB ayibonwa"? Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi:
Abashayeli esetshenziswa emakhadigama laphatselene akusebenzi. Ukuze wenze lokhu, udinga nje ukuzivuselela. Lokhu kuyinto kwetfulwe prosto.Zaydite esizeni nomkhiqizi yakho ye-flash drive bese ulanda abashayeli kudingeka.
Vala ukubonakala-USB amadivayisi Disk Management. Uzodinga ukuze uyivule. Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili:
iya ku "Qala" imenyu, bese uthi "Run ..." (noma cindezela Win R okhiye). Manje thayipha umyalo "diskmgmt.msc" bese ucindezela u-Enter "Faka";
ku "Qala" imenyu, chofoza "Control Panel", bese ukhetha "Amathuluzi Administrative." Ngaphezu kwalokho, "Computer Management" futhi imenyu kwento "Amathuluzi". ifasitela lizovuleka phambi kwakho, futhi uma nje iyasebenza, zama ukuyikhipha futhi kabusha sivale USB flash drive. Uma idivayisi isebenza, it is, ngokufanele, uzonyamalala futhi uvele kuhlu. Uzodinga kuphela chofoza inkinobho yegundane kwesokudla bese "Setha Kuyasebenza".
3. fleshkarty amagciwane. Yebo, lezi zinhlelo ezinonya njengoba kuthinta ukubukeka amadivaysi. Ezimweni eziningi, le ndlela kufanelekile uma computer akakuboni micro stick, ngoba liyisihlalo Lesi sifo siphatha kakhulu amagciwane, njengoba kunjalo ngokuvamile, thina ukulayisha ukwaziswa okuvela emithonjeni ehlukahlukene obathembayo, ezifana ifoni kamakhelwane. bonke nje lapha. Engingakusho nje scan yakho yesistimu yokusebenza igciwane scan. Uma konke malware uzohlonzwa futhi iqedwe, ungakwazi kalula abambe ulwazi oluqukethwe ku-USB-idivayisi.
4. ezinganele ugesi, ukuze ikhompyutha akaboni induku. Yini okumelwe uyenze? Uzodinga ukuvala ngesikhathi kumadivayisi angaphandle njengamanje exhunywe kwi-PC. Ngokwesibonelo, ikhamera yewebhu, iphrinta, isithwebuli, wangaphandle hard disk, noma okunye okufana nalokhu Uma kunjalo, emafleshikhadi ngeke ngokushesha ezikhonjwe ikhompyutha. Ithiphu: esikhundleni ugesi ezikhona ne elinamandla kakhulu, ukuze esikhathini esizayo ukuze ugweme izimo ezinjalo.
Uma ikhompyutha akakuboni USB flash drive ikhamera, iseluleko, kodwa kunalokho izinkinga kungenzeka futhi izixazululo engenhla, qiniseka ukusiza ukuxazulula inkinga.
Indlela ukubuyisela ngobhasikidi ifolda?
Kulahleke imifanekiso kudeskithophu (Windows 10): kanjani ukubuyisela?
Indlela ukubuyisela umlando wesiphequluli (masinya)?
Phinda amafayela esusiwe kusukela idrayivu kanzima
Meatless izitsha ezivela amazambane: elula futhi okumnandi
"Imiphefumulo Dead": isithombe Nozdryov
Revolver Ocelot - ngubani?
Fashion umnsalo lesikhumba jacket: izici kanye nezincomo
Ubani noma yini kungaba Indian? 5 izinto ezithinta amaNdiya eyaziwa emhlabeni wonke
How fast futhi okumnandi ukupheka cheesecakes kusukela cottage shizi?